Cajal: Qalabyada WordPress ee loogu talagalay ilaalinta bogga
Bilaabista suuqa suuqa WordPress waa mid ka mid ah caqabadaha ugu adag ee horumariya. Helitaanka dhibicda gundhiga waa hubaal, laakiin waad iska fogeyn kartaa tartanka adigoo isticmaalaya talooyin fudud. Waxa ugu muhiimsan ee aad u baahan tahay inaad sameysid waa in la fahmo fahamka hannaanka ay ku dhexjiraan oo ay ka faa'iideysanayaan goobtaada. Faa'iidada wanaagsan ayaa muujinaysa dadka isticmaala iyo kuwa sameeya horumarinta in aad dayactirayso goobtaada maalin kasta waxayna ka caawisaa hagaajinta waxqabadka guud ee goobta.
Haddii aad ku wareersan tahay waxa ku jira WordPress ku xirnaanta la socoshada, halkan Ross Rossber, khabiirka sare ee Semt , wuxuu leeyahay liis xiiso leh oo ah lix qalab oo muhiim ah oo ku saabsan dayactirka goobta
Iyadoo webmaster ama blogger, waxaad ogtahay in qadarka ereyada spamka ay kordhayaan internetka mana jirto hab sax ah oo looga takhaluso faallooyinka - long term care insurance company financial statistics. Mahadsanid, waxaan leenahay plugin Antispam Bee, kaas oo ah maskax-buuqsan oo aad u fiican. Qalabkan lacag la'aanta ah wuxuu qabtaa faalooyinka spam waxaana lagu aamini jiray boqolaal kun oo qof oo internetka ah. Way u fiicantahay isticmaalka ganacsiga iyo kuwa gaarka loo leeyahay iyo wax badan lagama yareeyo. Haddii aanad helin Akismet sababo aan la filayn, plugkani waa kuu habboon yahay
WordPress plugin waa mid ka mid ah kuwa ugu fiican ee dayactirka boggaaga. Jetpack ma aha mid caan ah oo loo yaqaan 'plugins', laakiin waa heshiis fiican. Tani waxay gacan ka geysaneysaa hagaajinta shaqeynta goobtaada..Jetpack waa feejignaan buuxa oo leh waxyaabo waxtar leh oo xiiso leh oo aad ku tiirsan tahay. Fikradaha ugu muhiimsan waxaa ka mid ah warbixinno wax ku ool ah oo falanqayn leh, bixinta nuxurka, caawinta xulashada sawirrada iyo moobiilka moobiilka fudud
Haddii aad niyadjabto sababtoo ah xawaaraha gaaban ee boggaaga oo aan lahayn faylal kayd ah, waa inaad isku daydaa Dareeraha. Waa mid ka mid ah keydka WordPress ugu wanaagsan oo ugu kalsoon oo loogu talagalay dayactirka goobta. Duuble ayaa kuu oggolaanaya inaad sameysid faylasha gurmadka xaaladaha degdegta ah waxayna kuu ogolaaneysaa inaad macluumaadka meel uga qaaddo meel kale oo aan dhibaato lahayn. Waxaad ubaahan tahay inaad ku rakibtid fiilooyinkaas oo aad shaqadaada ka dhigto mid fudud oo ka dhakhso badan
4. Hubinta Mawduuca
Hubinta Mawduuca waxay kaa caawineysaa inaad eegto in mawduuca boggaaga uu yahay mid taariikhda la socda iyo sida uu ufilan yahay WordPress. Xaqiiqdu waxay tahay isticmaalka isticmaalaha WordPress userspresspress iyo wuxuu kaa caawinayaa in aad tijaabiso mawduucaaga soo gudbinta directory iyo kaydiyaa badan oo faylasha kaydka ah adiga oo ku matalaya.
5. Maareeyaha Cusub ee Cusub
Cusbooneysiinta boggaaga WordPress adiga oo aan lahayn plugin waxay noqon kartaa mashaakil gaar ahaan markaad websiyo kala duwan isku wato. Maareeyaha Easy Update Manager, hadda waa kuu sahlan tahay inaad xakamayso boggag badan, mawduucooda, content, iyo plugins isla waqtigaas. Qeybta ugu fiican waa in fiiladaasi ay fududahay oo ay ku habboon tahay in la isticmaalo waxaana laga soo bixi karaa internetka. Marka la rakibo, waxaad isticmaali kartaa plugigaan si aad u abuurto faylasha kaydka oo badan waxayna isku xakameyn kartaa boggaga internetka ama blogka isla wakhtigaas.
Yoast SEO waa mid ka mid ah WordPress ugu wanaagsan oo loo isticmaalo plugos taariikhda. Waxay leedahay sifooyin fara badan waxayna isticmaashaa inta badan webmaster ama blogger. Qaababka asaasiga ah waxaa ka mid ah casriyaynta bogga xariirka ee XML, ku darista magacyada SEO, sharaxaada, iyo xarumaha gawaarida ee goobtaada.